HERO OF MYANMAR: ၅ - ၁၁ - ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
[13:53 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
- အမျိုးသမီး ၄ ဦး အစိုးရ စစ်တပ်က ခေါ်ဆောင်သွား click
- တွံတေး အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင်များ အရိုက်ခံရ click
- တွံတေးမြို့နယ် အာဏာပိုင်းများ၏ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျသူများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုင်စင်နှင့် ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ရရေး click
- ရွှေဝါရောင် အကျဉ်းသားဟောင်း သံဃာများ သိက္ခာထပ်မင်္ဂလာ click
- ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကော်မီတီအတွက် အတိုက်အခံ ၁၀ ပါတီ ဆွေးနွေး click
- လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦး၏ ၁၃ ချက်ပါ အဆိုများ မေးခွန်းအဖြစ် ပြောင်းခိုင်း click
- လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်မည်ဟု ဆို click
- မြန်မာ့အရေးအတွက် ကရင်နီအမျိုးသမီး ပထမဆုံးအကြိမ် လေထီးခုန်ချ click
- အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာဒေါ်သန်းနွဲ့နှင့် အင်တာဗျူး click
- ဘာကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို မမေးတာလဲ (ဆောင်းပါး) click
- အမျိုးသားတွေ ကြောက်လို့ အမျိုးသမီးတွေကို ခိုင်းရလား (ဆောင်းပါး) click
- မေယူတောင်တွင် သစ်ထုတ်လုပ်မှုကြောင့် တောဆင်ရိုင်းများ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်လာနေ click
- ခွေးရူးအကိုက်ခံရသည့် မောင်တောမှ ကလေး ၂၀ နီးပါး ဆေးဝါးမလုံလောက်၍ စိုးရိမ်ရ click
- ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ၀င်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရခြင်း အယူခံ အောင်မြင် click
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းမှုကို ကာကွယ်မယ့် ငှက်ပျောပင် click
- ဧရာဝတီ မဲခေါင် နိပါး ပေါ်က လွင့်မျောနေသော တိမ်တိုက်များ (၁) (ဆောင်းပါး)click
- တမ်းချင်း (ကဗျာ) click
- မညီညာသော မျက်နှာပြင်ပေါ်က ပြန်လင်းတန်းများ (ကဗျာ) click
- နွေဦးကာလ စစ်ပွဲ (ကဗျာ) click
- ဦးဖိုးကျား၏ မင်းကတော်မော်ဒန်သစ် (ကာတွန်း) click
- ယနေ့ ဘန်ကောက် ရေကြီးမှု အခြေအနေ click
- ဘန်ကောက်မြို့တွင်း ရေမြုပ် click
- မဟာချိုင်ရေကြီးမှု သတိပေးချက် click
- ရေကြီးမှု အရေးပေါ် ကြေညာချက်အရ မဟာချိုင်ဒေသ ရေမြုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိ click
- ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေက တူးမြောင်းတံခါး ပိတ်တာကို တားမြစ်ပိတ်ပင် click
- အဆိပ်ပြင်းမြွေ ၁၅ ကောင် လွတ်နေသည်ဟု ဆို click
- ဥက္ကလံသပိတ်စခန်းရဲ့ အထွေထွေသပိတ်ခေါ်သံနဲ့ ထူးသံများ click
- ၂၀၁၁ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်းကိန်း အစီရင်ခံစာ နော်ဝေ အကောင်းဆုံး click
ဒီကေဘီအေ ရှင်းလင်းပွဲ - ဘီဘီစီ click here
ခွေးရူး အကိုက်ခံရသည့် မောင်တောမှ ကလေး ၂၀ နီးပါး ဆေးဝါး မလုံလောက်၍ စိုးရိမ်ရ - နိရဉ္စရာ click here
မေယူတောင်တွင် သစ်ထုတ်လုပ်မူကြောင့် တောဆင်ရိုင်းများ ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်လာနေ - နိရဉ္စရာ click here
ဒီကေဘီအေနှင့်အစိုးရ သဘောတူညီချက် သုံးချက်ရရှိ - ဒီဗွီဘီ click here
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေး DKBA နှင့် အစိုးရ အပစ်ရပ် သဘောတူ - မဇ္စျိမ click here
DKBA အပစ်ရပ်ပြီ - ဧရာဝတီ click here
၈ လကျော်ကြာ မြန်မာစစ်တပ် ပိတ်ထားသော SSPP ဌာနချုပ်ဖြတ်သန်းသည့်လမ်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် RCSS အသင့်ဖြစ်ပြီ - သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက် click here
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းနဲ့ ဗွီအိုအေ - ဗွီအိုအေ click here
ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ အတည်ပြုချက် NLD အကောင်းမြင် - ဗွီအိုအေ click here
မြန်မာပြည်အသွင်ကူးပြောင်းရေး အမေရိကန်အကောင်းမြင် - ဗွီအိုအေ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျာမန် ဒုတိယ-ဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံ - NLD click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် တွေ့ဆုံ - NLD click here
အပြုသဘောတိုးတက်မှု ကုလကိုယ်စားလှယ် အားပေး - ဘီဘီစီ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံမှုသည် အကျိုးရှိကြောင်း အမေရိကန်သံအဖွဲ့ပြော - ဒီဗွီဘီ click here
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ရာဥပဒေ ပြင်ဆင်မည့်အကြံ အကောင်းလား၊ အဆိုးလား - ဧရာဝတီ click here
သင့်မြတ်ရေး ဆက်လက် အားထုတ်ဖို့ ကုလတိုက်တွန်း - ဗွီအိုအေ click here
မြန်မာအစိုးရသစ်အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ မျှော်လင့်ချက် ကြီးစွာထား - ဧရာဝတီ click here
တိုင်းရင်းသားအရေး တိုးတက်ဖို့ လိုသေးတယ်လို့ ကုလကိုယ်စားလှယ်က ဝေဖန် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မြန်မာကို အကူအညီ ပိုပေးဖို့ အမေရိကန် ထိပ်တန်းသံတမန်များ ကတိပြု - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
အမေရိကန်သံတမန် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများနှင့် တွေ့ဆုံ - ဒီဗွီဘီ click here
အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ ဆွေးနွေး - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွှတ်ပေးရေး အမေရိကန် ဆက်လက်ဖိအားပေး - ဗွီအိုအေ click here
ကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အကြံပြု - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေနေများ အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မေးမြန်းခဲ့ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
အမေရိကန်အရာရှိတွေရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတွေ - ဘီဘီစီ click here
မလေးရှားကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ မဟာသီယာ တိုက်တွန်း - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် တွေ့ဆုံ - မိုးမခ click here
အစိမ်းရောင် စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ဖရင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် - ဒီဗွီဘီ click here
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ရန်ကုန် ညီလာခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် - ဧရာဝတီ click here
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြီ - မဇ္စျိမ click here
မြန်မာ တရုတ် ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေးပွဲ အမေရိကန် ထိပ်သီး တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှာ ကျင်းပ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
တပ်မတော်နှစ်ရပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
အကြံအစည်တခုခု ရှိသလား?? - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
သံအမတ် ဦးမြင့်နောင် ဘယ်သူလဲ - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
သံအမတ်ဦးမြင့်နောင်၏ နောက်ကြောင်း စစ်ဆေးရန် တောင်အာဖရိက သတင်းဌာန လှုံ့ဆော် - မိုးမခ click here
လောပိတ မွမ်းမံရေးတွင် KDRG မှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဦးစွာ စုံစမ်းစေလို - ကန္တာရဝတီတိုင်းမ် click here
အရင် ရိုးအီနေတဲ့ပုံစံကနေ နည်းနည်းလေး ပြောင်းထွက်လာတာပါ (ကြေးမုံသတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ်) - ဒီဗွီဘီ click here
မြန်မာ့မူပိုင်ခွင့် ဘာလဲ ဘယ်လဲ၊ မယောင်ရာ ဆီလူးတဲ့ ဆင်ဆာ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်များနဲ့ ရသ - ဧရာဝတီ click here
သမ္မတထံ စာတင်သည့် လယ်သမားများ စစ်ဆေးခံရ - ဧရာဝတီ click here
အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသူတွေအရေး လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ စိုးရိမ် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
တရုတ် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း အတွက် မြေလျော်ကြေးငွေများ ဖြတ်တောက်ခံနေရ - နိရဉ္စရာ click here
UWSA စတင်တည်ထောင်ရာ၌ ပါဝင်သူ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ကွယ်လွန် - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
ဖမ်းဆီးခံ ကချင်အမျိုးသမီး အတွက် စိုးရိမ်ကြောင်း KWAT ပြော - မဇ္စျိမ click here
စစ်တပ်မှ အမျိုးသမီးငယ် ၃ဦးကို အဓမ္မကျင့်သတ်ဖြတ် - KIC click here
ကရင်မိန်းကလေးငယ် ၃ဦး လုယက်ခံရ - KIC click here
နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ ၂ဦးကို အစိုးရစစ်တပ် ဖမ်းဆီး - KIC click here
ဒေလီ ချင်းဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး (၃) ဦး နှင့် ယောင်္ကျား တဦး အိန္ဒိယ လူမျိုးများက ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကား - ခိုနူမ်းထုန် click here
ဘန်ကောက်က ရေဘေးဒုက္ခသည် မြန်မာအလုပ်သမားအချို့ အကူအညီမရ - ဒီဗွီဘီ click here
ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ ငွေထုတ်သည့်ကတ်ပြား စတင်ထုတ်ပေးတော့မည် - ဒီဗွီဘီ click here
ရခိုင်ပြည်နယ် တိုက်နယ် အုပ်စုတခုတွင် မီးလောင်မှု တခုဖြစ်ပွား - KPN click here
အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ” - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
သင်္ကန်းညီနောင်က စာ ၂ စောင် - ဧရာဝတီဘလော့ဂ် click here
မြန်မာပြည် ရေကြီးမှုအကြောင်း (သတင်းသုံးသပ်ချက်) - ဗွီအိုအေ click here
အမျိုးသားတွေ ကြောက်လို့ အမျိုးသမီးတွေကို ခိုင်းရလား…? - ကန္တာရဝတီတိုင်းမ် click here
မြန်မာ့အရေးအတွက် ကရင်နီအမျိုးသမီး ပထမဆုံးအကြိမ် လေထီးခုန်ချ - ကန္တာရဝတီတိုင်းမ် click here
ဘာကြောင့် ဒီမေးခွန်းကို မမေးတာလဲ (ဆောင်းပါး) - မိုးမခ click here
ရယ်သောသူသည် အသက်ရှည်၏ (ဓာတ်ပုံဆောင်းပါး) - မိုးမခ click here